Gịnị bụ Clickbait na olee otu o si arụ ọrụ? | ECommerce ozi ọma
José Ignacio | | eCommerce, Ndị egwuregwu dị ọcha
Y’oburu n’inwe oge obula na intaneti, o yikariri ka ihula ihe edere na onyonyo nke isi okwu di n’elu. Ha bụ naanị ntakịrị ihe atụ nke akpọrọ clickbait.
Pịabait bụ isiokwu tabloid nke na-agba gị ume pịa njikọ njikọ isiokwu, eserese, ma ọ bụ vidiyo. Kama igosipụta ezi ebumnobi, isi akụkọ clickbait na-amasịkarị mmetụta uche gị na ọchịchọ ịmata ihe gị. Ozugbo ị pịrị, ebe nrụọrụ weebụ na-ejikọ njikọ ahụ na-enweta ego site na ndị mgbasa ozi, mana ọdịnaya dị adị na-abụkarị nke a na-enyo enyo na izi ezi. Ebe nrụọrụ weebụ na-eji clickbait iji dọta ọtụtụ clicks dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-abawanye mgbasa ozi mgbasa ozi ha.
Ọ bụ ezie na ejirila isiokwu tabloid na ọdịnaya mee ihe kemgbe narị afọ nke iri na itoolu, ha abawanyela na ụwa dijitalụ. Ọ bụ ezie na ọ dabere na echiche ochie, clickbait ka na-arụkwa otu ọrụ dị ka onye bu ya ụzọ: iji dọta uche n'ụzọ ọ bụla dị mkpa.
1 Gịnị bụ Clickbait n'ezie?
2 Kedu ka Clickbait si ejikọta anyị?
3 "Vegas Mmetụta"
4 Pịabait akụkọ na ọdịnaya
5 Nko a nke ndi oru ga eji
6 Pịa karịa ihe mgbagwoju anya maka mmadụ niile
7 Ebee ka ị chọta clickbait?
Gịnị bụ Clickbait n'ezie?
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, “clickbait” bụ ọdịnaya akpachapụrụ anya ma ọ bụ kọwaa nke ọma iji dọta ndị ọrụ na weebụsaịtị. Pịabait na-arata ndị ọrụ n'otu ntabi anya, isi okwu na-akpali akpali, dị ka "ị gaghị ekwenye na ya" ma ọ bụ "ị gaghị ama ihe ga-eme na-esote," mana ị gaghị emezu atụmatụ ndị ọrụ ahụ.
Otu n'ime ụdị ọdịnaya "clickbait" kachasị ewu ewu bụ imepụta "ndepụta" nke na-achịkọta ọdịnaya sitere na saịtị ndị ọzọ iji dọtakwuo ndị ọrụ na saịtị.
Ọ bụla pịa na echiche nke isi mmalite isiokwu a na-ewepụta mgbasa ozi sitere na ad enweta ego maka post. Ka ịpịpị otu isiokwu na-anata, ka ọ ga-enwetakwu ego. N'ihi nke a, a na-eme pịa click iji dọta ndị na-agụ nnukwu akwụkwọ na anaghị ejikarị ụkpụrụ nduzi dị mma na isi mmalite nyocha. Articlesfọdụ isiokwu clickbait ga-eji ọtụtụ onyonyo ma ọ bụ obere vidiyo gbasaa n'ọtụtụ peeji iji nwekwuo ọnụ ọgụgụ nke clicks onye ọrụ. Ibe ọ bụla na "clickbait" ga-ebu ọtụtụ mgbasa ozi.
Mana ọ gafere karịa na ihe echiche ọhụụ a pụtara. N'ihi na n'eziokwu, ị nweghị ike ichefu n'oge a ziri ezi iji mara ihe Clickbait bụ, nke bụ n'ezie ihe dị iche na ihe anyị hụgoro ugbu a. Yabụ, tupu anyị abata etu clickbait si arụ ọrụ, ka anyị kọwaa ya. Nkọwa Merriam-Webster masịrị m karịa nke Wikipedia. MW na-akọwa clickbait dị ka: "Ihe (dịka isi okwu) e mere iji mee ka ndị na-agụ chọrọ pịa hyperlink, karịsịa mgbe njikọ ahụ na-eduga na ọdịnaya nke uru ma ọ bụ mmasị na-enyo enyo."
Mgbe ụfọdụ, clickbait na-adịkarị ka ihe na-arata azụ na ihe ntụgharị. Nke ahụ bụ, anyị gụrụ isi okwu ma ọ bụ njikọ na-adọrọ adọrọ, pịa na ya, naanị iji hụ onwe anyị na mgbasa ozi. Imirikiti ịpị aka na ntanetị bụ ụdị "echeghi eche". Enwere ọdịnaya mgbe anyị pịa njikọ ahụ, mana ọ na-agbasa na mgbasa ozi. Ya mere, edemede ma ọ bụ vidiyo ahụ bụ n'ezie ụrà nke na-ekpughe anyị na mgbasa ozi ahụ, nke bụ ezigbo nzube nke ọdịnaya ahụ. Mgbe mmadụ zuru oke gosipụtara mgbasa ozi ahụ, a ga-enwe pasent anyị bụ ndị na-azụ ahịa ngwaahịa ndị a na-ere ahịa. Ozo, anyi matara na udi ihe a "clickbait" a na aru oru nke oma nihi na obughi na ya, ogaghi adi. O sitere na okpu Darwin.
Kedu ka Clickbait si ejikọta anyị?
Enweghị azịza dị mfe maka ajụjụ a, mana anyị ga-atụle otu n’ime ihe kpatara na anyị enweghị ike ịjụ iguzo pịa. A na-adọta ụmụ mmadụ ịchọ ozi na ụwa anyị n'ihi na ọ bara uru nlanarị. Anyị na-achọ ihe ọmụma n’otu ụzọ ndị nna nna anyị hà si chọọ ihe oriri. Nke a nwere "njikọ" na anyị. Clickbait bụ nkwa na a ga-ekpughe ozi dị ịtụnanya, nke na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụ nke na-awụ akpata oyi n'ahụ ma ọ bụrụ na anyị pịa njikọ ahụ.
Usoro ụgwọ ọrụ dopamine anyị gụnyere na mkpali anyị ịmụ banyere ụwa anyị. Dopamine, homonụ, na-etinye aka na obi ụtọ, mana ọ nwere ọtụtụ ọrụ. Ọ bụ ezie na nke a doro anya na ọ nwere ike ịbụ ezigbo ọrụ aka, enwere ahụ nyocha nke na-atụ aro na dopamine na-akpali omume karịa site na ọchịchọ (nke a na-akpọ salient na-akpali akpali) karịa uto. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, dopamine na-emepụta ọkọ nke chọrọ ịkọ ọkọ.
Pịabait na-arụ ọrụ, na akụkụ ụfọdụ, n'ihi na nkwa nke ozi na-akpali akpali na-eme ka otu ụzọ dopamine si aga. Dopamine a tọhapụrụ ma mepụta ọkọ ahụ enwere ike ịkpụcha naanị site na ịnweta ozi ahụ ekwere. Itingta ahụhụ ahụ (ya bụ, ịnweta ozi ahụ) anaghị enye anyị nnukwu obi ụtọ. Ihe ọ na-enye anyị bụ enyemaka na "itch" ahụ ịghara ịpị njikọ ahụ. N'ụzọ dị otú a, enwere ike ịtụle ya dị ka ụdị mkwado na-adịghị mma.
Wayzọ ọzọ nke clickbait na-adọta anyị bụ site na usoro mgbanwe booster program. A maara nke a oge ụfọdụ dị ka "Las Vegas Effect" n'ihi na mmemme mgbanwe dị elu na-esonye na ịgba chaa chaa. M blogged banyere "Vegas Effect" nke anyị meziri na a ụka nke ihe mere meziri nwere ike ịbụ ihe siri ike iguzogide.
Isiokwu ndị ahụ "clickbait" na-eme ka anyị chọọ ịmata ihe kpatara ákwà mgbochi ahụ, yabụ. Iji kọọ maka onye nwere ezi uche Forrest Gump, bụ onye hotara nne ya, "Ndụ dị ka igbe chọkọletị." Never maghị ihe ị ga-enweta. Anyị amaghị otú nzaghachi ndị a ga-esi awụ akpata oyi n'ahụ. Kedu ihe ọjọọ nwatakịrị m kachasị amasị m ga-eme? Kedu ndị bụ ndị kacha mma na okwute na mpịakọta oge niile? Aghaghị m ịmata ihe kpatara alụmdi na nwunye ndị a a ma ama ji tụọ n'ike n'ike!
Pịabait akụkọ na ọdịnaya
Isi okwu nke isiokwu clickbait bụ ihe kachasị mkpa. Edere isiokwu Clickbait iji duzie mmetụta ma ọ bụ nweta uche. Dịka ọmụmaatụ, isi okwu nwere ike ịkpasu iwe ("what ga-ewe iwe maka ihe mere nwa agbọghọ a"). Typesdị clickbait ndị ọzọ ejiri akọ wee mee iji juo ọchịchọ ịmata nke ndị mmadụ ("Nwoke a hụrụ envelopu akàrà akara. Won't gaghị ekwenye ihe dị n'ime!").
Oge ụfọdụ, isi okwu na ọdịnaya nke clickbait bụ ihe na-akpali akpali, na-akpali agụụ mmekọahụ, ma ọ bụ na-ese okwu n'ọdịdị. Typesdị akụkọ ndị a, yana onyogho na-adọrọ mmasị na mgbasa ozi mgbasa ozi na ịza ajụjụ, bụ ihe ndị nkịtị nke clickbait.
Nko a nke ndi oru ga eji
Ọ bụrụ na ị dị ka m, ịntanetị bụ ebe a na-egwu ala nke ịnabata ihe ndọpụ uche. M ga-anọdụ ala dee edemede kachasị akọrọ banyere ihe dịka mmalite nke uwe elu uwe na narị afọ nke XNUMX, yana n'etiti peeji zuru oke maka nyocha m, m ga-ahụ njikọ nke na-ekwe nkwa ibupụ m na nke a na-agwụ ike na Tupu m mara ihe na-eme, ọ gafeela awa iri ma m na-ele vidio nke otter na osisi pogo. Ọ na-amasị m iche banyere ya dị ka mmetụta "Oke oyibo".
Websitesfọdụ weebụsaịtị maara nke ọma na ndị "dị ka m" na-agbagha ngwa ngwa, na ndị mmadụ chọrọ ịmata, na ndị mmadụ ga-pịa ihe ọ bụla iji zere ịrụ ọrụ "ezigbo", ha jikwa eziokwu a.
Linksfọdụ njikọ anyị pịrị na-enye ihe ọmụma, ihe ọchị, na mkpa ... Ọ bụ ezie na ọ na-adọpụ uche, enwere njikọ ndị ọzọ na-akpata ọnwụnwa nwere obere ma ọ bụ enweghị uru ma bụrụ ndị ezubere iche iji kpọga gị na ibe ma debe gị ebe ahụ ruo mgbe ebighi ebi, na ịpị Ọnwụnwa Isi akụkọ otu. mgbe ọzọ… Nke ahụ na-ewetara anyị isiokwu ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ ka ị pịa, nke a bụ clickbait.
Pịa clickbait bụ ihe ndọpụ uche ọzọ n'ime ụwa nke bụla ihe ndọpụ uche. Kwa ụbọchị, anyị na-enweta ozi, ntuziaka ka ị pịa ebe a, ma ọ bụ zụta nke a wee gbakọọ ihe bara ezigbo uru ma ọ bụ nwee ụfọdụ uru na-esiwanye ike. Iji gbakwunye na ndụ dijitalụ a na-eme mkpọtụ, enwere isiokwu clickbait, obere, akụkọ na-adọrọ mmasị ka emepụtara iji dọpụ uche gị ma mee ka ị gụọ peeji nke ibe nke okwu na-enweghị isi na nke na-abụghị eziokwu.
Pịabait na-arụ ọrụ na ụkpụrụ dị mfe, jupụta enweghị isi nke mmasi. Nke a dị mfe dịka inyefe ihe chọrọ ịmata ma kwere nkwa afọ ojuju. Yabụ, ka ị ghọta ya nke ọma site n'oge a gawa. Clickbait bụ ihe a maara nke ọma (na overused) copywriting tactic na-achọ ịwa clic ma ọ bụ ego site na oke utu aha dị egwu. Onye ọrụ ahụ, na-achọ ịmata ihe site na okike, dara maka nka a ugboro ugboro, yabụ aha ahụ, nke atụgharịlarị ọtụtụ oge dị ka "pịa nri" ma ọ bụ "cyberanzuelo".
Pịa karịa ihe mgbagwoju anya maka mmadụ niile
Upselling bụ usoro ahia nke na-agba ndị na-azụ ahịa ume ka ha mụbaa ihe nzụta ha site na mkpali. Ebe igodo maka mmepe ya. Ahịa ọdịnaya gbasara imepụta okporo ụzọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịdọta ndị ọbịa na saịtị gị, ohere ịga nke ọma n'ịntanetị fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị.
Agbanyeghị, n'ime afọ abụọ gara aga, enweela ndị ahịa na ndị nwe obere azụmaahịa na-anwa ịchọta ụzọ dị mfe iji bulie okporo ụzọ site na ịpịpụta na ịkwalite ihe akpọrọ 'clickbait'.
Mgbe ejiri ya nwayọ ma jiri nwayọ, clickbait nwere ike ịbụ ngwa ahịa dị ire, mana ị ga-akpachara anya. N'ọtụtụ ọnọdụ, clickbait bụ uzommeputa maka ọdachi.
Isiokwu Clickbait na-adịkarị ihe na-erughị narị mkpụrụ okwu 300, ma ha anaghị etinye echiche ma ọ bụ ọdịnaya mbụ. Kama nke ahụ, ha bụ nchịkọta akụkọ ogologo ma ọ bụ vidiyo agbakwunyere nwere ike ịchọta ebe ọzọ, na nyocha agaghị adaba isi okwu ma ọ bụ usoro ha kwekọrọ.
Ọtụtụ ndị nwere obere azụmaahịa na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-enwe mmasị iji clickbait n'ihi na ọ bụ ụzọ dị oke ọsọ iji mepụta okporo ụzọ na weebụ - ọ nwere ike ị nweta nsonaazụ. Ihe edepụtara nke ụlọ ọrụ nwere ike ịchekwa ndị ọrụ ọtụtụ oge na ike na-anwa ịgbakwunye ozi maka onwe ha. Ọganihu na-esote na okporo ụzọ nke ọdịnaya a na-emepụta nwere ike melite saịtị na saịtị na engines ọchụchọ na-enweghị atụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, nke ahụ bụ mmeri.
O siri ike ikwu ma ọ bụrụ na okporo ụzọ ahụ sụgharịrị ozugbo gaa ngbanwe dị elu na ahịa dị elu. Ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-atụkwasị obi nke ukwuu na ịpị aka na ntanetị, ọ nwere ike ịlaghachi azụ ịta ha ike.
Nsogbu a karịrị nkwa na n'okpuru nnyefe, yabụ ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ịnwa izere nke a mgbe ọ bụla enwere ike. A sị ka e kwuwe, ọ dịghị onye na-enwe mmasị na-eche na e duhiela ha ma ọ bụ mebie oge, yabụ ọ bụrụ na ịmalite izipu ma ọ bụ na-akwalite clickbait ọtụtụ mgbe, akara gị nwere ike bụrụ okwu na-egbu egbu maka ozi a na-enyo enyo ma ọ bụ ego furu efu.
Karịsịa, ị nwere ike ịfụ onwe gị na usoro nke SEO.
Nchọpụta ọchụchọ dị ka Google gụnyere ọtụtụ njirisi na algọridim ha iji mepụta peeji nsonaazụ maka ndị ọrụ, otu n'ime ihe ndị ahụ bụ ogo ọdịnaya weebụ. Kwa ọnwa abụọ, Google wepụtara usoro nke emelitere iji nyochaa clic, ọdịnaya abụọ, na akụkọ adịgboroja, ma mechaa taa ntaramahụhụ peeji nke yana weebụsaịtị ndị metụtara ọdịnaya ahụ dị ala site na ịkwanye ha na peeji nsonaazụ.
Ihe ọzọ na nyocha ọchụchọ na-echebara echiche mgbe ị na-enwe saịtị dị iche iche bụ ọnụego bounce nke ibe weebụ. Ọ bụrụ na ndị ọrụ pịa na ibe, chọpụta ọdịnaya dịka ihe na-abaghị uru, ozugbo "ibiaghachi" na saịtị ahụ na-enweghị ịpị ibe ọzọ, Google na-ekewa saịtị ahụ dịka ihe na-abaghị uru site n'echiche onye ọrụ. Ka ndị ọrụ na-agbapụkwu ọdịnaya na-abaghị uru, ka weebụsaịtị ahụ ga-ata ahụhụ.
Facebook ewerewokwa usoro nke ya megide clickbait. N'oge ọkọchị gara aga, onye mgbasa ozi mgbasa ozi wepụtara mmelite algorithm ọhụrụ nke na-egosipụta clickbait nke azụmaahịa na-eziga, na nke na-egbochi post ndị ahụ ịpụta na ntanetịime Ndị Ọrụ.
N'iburu nke a n'uche, ọ bara uru iche echiche nke abụọ tupu ị na-akwado clickbait na weebụsaịtị azụmaahịa gị ma ọ bụ kekọrịta ya na mgbasa ozi mmekọrịta. Mgbe ejiri ya nwayọ ma mepụta ihe, ọ nwere ike iwepụta okporo ụzọ dị mma nke nwere ike ime ka ọnụnọ gị n'ịntanetị dị ike. Nkọwapụta a na-abawanye na-abịa n'ụzọ dị iche iche uru dị iche iche.
Mana ịdabere nke ukwuu na clickbait bụkwa ụzọ dị oke egwu iji mebie SEO gị, tufuo ndị na-eso ụzọ na mgbasa ozi mmekọrịta, ma mebie ntụkwasị obi gị. Ya mere, ị kwesịrị ịkpachara anya. Mgbe ụfọdụ ọ dị mma ịghara ịwụli elu na bandwagon, ma belụsọ na ị bụ onye na-ere ahịa nwere ntụkwasị obi, ọ pụtara na ị kwesịrị izere ịpị ịpị.
Ebee ka ị chọta clickbait?
Nwere ike ịchọta ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla n'Internetntanet, nke mere ka o sie ike izere ya. A na-ahụkarị isiokwu Pịabait na ebe dịka mgbasa ozi mmekọrịta na blọọgụ, ebe ọtụtụ saịtị buru ibu dịka akụkọ gbasara ihu igwe na ụlọ ọrụ akụkọ na-enye ohere mgbasa ozi maka ọdịnaya clickbait. Nke a pụtara na ịkwesịrị ịkpachara anya tupu ịpị njikọ njikọ, ọbụlagodi mgbe ị nọ na ebe nrụọrụ weebụ dị mma.
Olee otu m ga-esi amata ya?
Nwere ike ịmata clickbait site na isi okwu ma ọ bụ onyogho, mana ọ naghị adị mfe mgbe niile. Mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ike ịkọ ọdịiche dị n'etiti pịa nri na isi okwu ziri ezi. E kwuwerị, ozi niile chọrọ ịdọta uche gị.
Enwere ụfọdụ ihe eji eme ihe na ọdịnaya clickbait, dị ka isiokwu na-edoghị anya na onyonyo ndị na-eme ka echiche gị bụrụ anụ ọhịa. Pịa clickbait na-ejikwa ihe ijuanya na iwe iji dọbara uche gị, yana ndepụta aha. Ọtụtụ njikọ na-eji ngwakọta nke ihe ndị a iji dọta uche gị.
Nke a bụ ụzọ dị mfe iji gwa ma ị na-elele isiokwu clickbait: Ọ bụrụ na isiokwu ahụ na-agwa gị otu ọ ga-adị gị kama ịhapụ ka i nwee mmeghachi omume nke gị, ọ nwere ike ịbụ na ịpị aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Gịnị bụ Clickbait na olee otu o si arụ ọrụ?
Kedu otu esi belata oke faịlụ PDF?